काँग्रेस नेतृत्वमा यी दाबेदार, कस्ले मार्ला बाजी ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काँग्रेस नेतृत्वमा यी दाबेदार, कस्ले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं, ६ असार । नेपाली काँग्रेसको भदौमा हुने महाधिवेशनका लागि नेता कार्यकर्ता सक्रिय हुन थालेका छन् । साउन देखि काँग्रेसको तल्लो इकाईको चुनाव सुरु हुँदैछ । तल्लो इकाईबाट नै आफू पक्षधर नेता कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउन नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।
काँग्रेसमा वडा तहबाट गाउँ÷नगर हुँदै क्षेत्र, जिल्ला को अधिवेशनको तालिका बनिसकेको छ । प्रतिनिधि चयनबाट नै नेतृत्व चयनमा मतदानको अधिकार पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य चुनिन्छन् । यसैले तल्लो इकाईबाट आफू निकटस्थलाई अगाडि बढाउन सक्रियता बढेको हो ।
काँग्रेसको देउवाइतर समूहबाट धेरैजना सभापतिको दाबेदार छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एकपटक प्रयास गर्ने चाहना राख्दै आएका छन् । उनी १३औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका थिए ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला बढी सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय छन् । उनी काँग्रेसको प्रथम महिला सभापति बन्ने दौडमा छिन् । कोइराला परिवार एक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी उनी देउवाइतर समूह मिलाउन लागेकी छिन् । जो चुनाव उठेपनि देउवाइतर खेमाबाट एकजना सहमतिमा उठ्नुपर्ने तर्क राख्छिन् । उनले आफ्नो नाममा सहमति निकाल्ने गरी रणनीति समेत बनाएकी छिन् ।